Xayawaanka sheekada taxanaha ah samatabbixinta - it's a lot more involved than it looks! - Butros Rescue Saga
“Waxaan nacnac burburin iyo tuuro baaraha agagaarka, Haddii aan rabay in aan xayawaanka samatabbixinta waxaan madax lahaa in uu hoy u xayawaan” sidoo kale in ay ahayd wax aan rumeysanahay in aan mar yiri. Haddii aad weligaa curatay quudhin King a ka dibna waxaa laga yaabaa in aad hayso fikrad qaar ka mid ah waxa aad ku sugan tahay, waayo,….kaliya lagu siri siinin by midabada cheery iyo critters cute ee Butros Samatabbixinta…“Waxa ay noqon doontaa mid xiiso leh waxay ku yidhaahdeen, nagu soo biiraan, waxay yidhaahdeen! adigu waad weyn tahay at kulan aad this jecel doonaa” Waxa uu leeyahay! sidoo haa waxaa soo baxday waa madadaalo, in la qabatimo ah 'Xitaa ma xusuusan karo haddii aan xayawaanka dhabta ah xitaa u gaar ah mar dambe’ nooc ka mid ah habka!
So if you’ve crushed your way through a tonne of candy and defied gravity to prove the aerodynamic aptitude of your Papa Pears and are ready for some more thrilling adventures then please join us on our voyage of discovery through the gnarly world that is home to the pet Rescue Saga. Ujeeddada cayaarta waxa ay tahay in ay si nabad ah u soo dejin xayawaanka aad si hoose ee shaashadda by nadiifinta ee blocks midab, waxaana Dareeri Hoostooda. Si aad u nadiifiso blocks waa in aad guji laba ama ka badan oo jaarka ah blocks midabka la mid ah, ka blocks more biiray oo ka bariyeelay sare dhibcood, iyo dhakhso aad xayawaanka masaakiinta gaaraan hooseysa.
heer kasta oo guud wuxuu leeyahay laba ujeeddooyinka; badbaadiyo tiro cayiman oo xayawaanka iyo goolal dhowr ah oo qaar ka mid ah dhibcood, xaq u sahlan! haa in waxa aan u maleeyey in marka hore aad u! Now there are some funky boosters available that are definitely handy in clearing unwanted blocks, Laakiin aniga ma ahi coiner a, Macna ma laha inta Waxaan eega at ma jirto hab aan sabab u noqon karta bixinta inuu ciyaaro kulan oo war wanaagsan waa inaad leedahay siinin in ay, dhammaan heerarka waa gaari karo iyada oo aan Waxuun gadashada…si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa in aad leedahay si ay door biday in ay dawarsanayay, saaxiibadaa noloshooda!
Ka taxadir in aadan si ha xayawaanka dhici.
Sida aad iska nadiifiso blocks shaashadda hoos kitaabbadii, trick waa blocks wax (ama xayawaanka) sare ee shaashadda marka aad ordo out of isu-gaynta in ay samaynaysaa fall in ay dhicistii, anfacaya haddii ay blocks rabin, not so much when they are essential pets needing rescue. Score enough points in succession however and in some levels you are rewarded with a firecracker that can clear an entire vertical column of blocks, aad u anfacaya Hubaal! sheekada taxanaha ah xayawaanka Samatabbixinta waa line hoose kulan kale oo ka mid ah istaraatijiyad iyo xirfad leh qaraxyo dhowr hufan Tuuri madadaalo. Ha uga xumaadeen aan sal-dhigida xoogaa nacabkaa…Waxaan ahay qireen xayiran on heer insanely adag at moment..so ku jira in!
Xayawaanka sheekada taxanaha ah samatabbixinta - it's a lot more involved than it looks!, 6.6 out of 10 based on 10 ratings